သင်မသိသေးတဲ့ ဘီယာရဲ့ အထွေထွေအသုံးဝင်ပုံများ…. -
ဘီယာမှာ ဗီတာမင် ဘီနဲ့ ဆီလီကွန်ပါဝင်တာကြောင့် ဆံသားကိုအားပြည့်စေပြီး ဆံသားလှပကျန်းမာစေပါတယ်။ ဆံပင်ပေါ်သို့ ဘီယာတစ်ခွက်ကိုလောင်းပြီး ဦးရေပြားကိုနှိပ်နယ်ပေးပါ။၅မိနစ်ခန့်ကြာမှခေါ်င်းပြန်လျှော်ပေးပါ။ဆံသားများတောက်ပတာကို တွေ့မြင်ရပါမယ် …။
ဘီယာမှာ အသားအရေနုပျိူစေသော ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင် အာနိသင်ရှိတာမို့အရေပြားအိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ထို့ပြင် အရေပြားဆဲလ်တွေကိုအားကောင်းစေပြီး အရေးအကြောင်းဖြစ်ခြင်းမှလဲ ကာကွယ်ပေးပါသေးတယ်။
ဘီယာ ထမင်းစားဇွန်း၁ဇွန်းကို ကြက်ဥအကာ နဲ့ သံလွင်ဆီ ၃စက်ခန့်ရောပါ။ထို့နောက် မျက်နာကို လိမ်းပေးပြီး ၁၀မိနစ်ထားပါ …။
ဘီယာမှာပါဝင်သော hop flower ကို ညအိပ်မပျော်သော ရောဂါများတွင် သဘာဝ အိပ်ပျော်ဆေးအဖြစ်ထည့်သွင်းအသုံးပြုပါတယ်။ သင့် ခေါင်းအုံးတွေကို ဘီယာ နဲ့ ရေ ဆတူရောထားသောအရည်ဖြင့် လျှော်ပေးပါ။ထိုခေါင်းအုံးဖြင့်အိပ်ပါက မြန်မြန်အိပ်ပျော်ပါလိမ့်မယ် …။
(၄) ခြေထောက်ညောင်းခြင်းကို ပြေလျော့စေတယ်
ဇလုံးတစ်ခုမှာ ဘီယာအေးအေးကိုဖြည့်ပါ။ထို့ထဲသို့ ခြေထောက်ကို မိနစ်အနည်းငယ်နှစ်ပါ။ သင့်ခြေထောက်ကိုအညောင်းပြေစေပါတယ် …။
(၅) အသားများ နှပ်ရာတွင် အသုံးဝင်ခြင်း
အသားများကို ဘီယာနှင့် နှပ်ခြင်းဖြင့် အရသာမပျက်စေပဲ ပိုမိုနူးအိစေပါလိမ့်မယ်။ သင်အသုံးပြုလိုသော အသားကို ဗူးတစ်ခုတွင်ထည့်ပါ။ထိုထဲသို့ ဘီယာနည်းနည်းထည့်ပြီး ရေခဲသေတာထဲတွင် တစ်ညအိပ်ထားပါ။နောက်တစ်နေ့မှာ အရသာကောင်းမွန်ပြီး နူးအိတဲ့အသားတွေကို ရရှိမှာပါ …။
ဘီယာခပ်နွေးနွေးကို အဝတ်စတစ်ခုတွင် သုတ်ပါ။ထိုအဝတ်ဖြင့် သစ်သားပရိဘောဂများကို ပွတ်တိုက်ပေးပါ …။
(၇) ယင်ကောင်တွေ ကို ပြေးစေတယ်
ဘီယာကိုခွက်တစ်လုံးတွင်ထည့်ပါ။ထိုခွက်ကို အလူမီနီယမ်ပြားဖြင့်ဖုံးပါ။ထိုအလူမီနီယမ်ပြားကို အပေါက်ငယ်လေးတွေဖောက်ထားဖို့ လိုပါတယ်။ထိုအပေါက်ကနေတဆင့် ယင်ကောင်တွေခွက်ထဲသို့ ကျသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် …။
(၈) သတ္တုများကို အရောင်တောက်ပစေခြင်း
ဘီယာတွင် အက်စစ်ပါဝင်မှု နည်းပါးတာမို့ သင့် လက်ဝတ်ရတနာများနဲ့စတီးအိုးများကို ပြောင်လက်အောင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။အဝတ်စတစ်ခုကို ဘီယာဖြင့်စိမ်ပြီး ပွတ်တိုက်ပေးရုံပဲဖြစ်ပါတယ် …။
ဘီယာတွင်ပါသော အက်စစ်များက သံကြေးမျာကို ဖြိုခွဲပေးပါတယ်။သံကြေးတက်သောအရာပေါ်သို့ဘီယာကိုလောင်းပြီး မိနစ်အနည်းငယ်ထားပါ …။
Writer_ Dr Jue ( XYZ News)
သငျမသိသေးတဲ့ ဘီယာရဲ့ အထှထှေအေသုံးဝငျပုံမြား….
ဘီယာမှာ ဗီတာမငျ ဘီနဲ့ ဆီလီကှနျပါဝငျတာကွောငျ့ ဆံသားကိုအားပွညျ့စပွေီး ဆံသားလှပကနျြးမာစပေါတယျ။ ဆံပငျပျေါသို့ ဘီယာတဈခှကျကိုလောငျးပွီး ဦးရပွေားကိုနှိပျနယျပေးပါ။၅မိနဈခနျ့ကွာမှချေါငျးပွနျလြှျောပေးပါ။ဆံသားမြားတောကျပတာကို တှမွေ့ငျရပါမယျ …။
ဘီယာမှာ အသားအရနေုပြိူစသေော ဓာတျတိုးဆနျ့ကငျြ အာနိသငျရှိတာမို့အရပွေားအိုမငျးရငျ့ရျောခွငျးမှ ကာကှယျပေးပါတယျ။ထို့ပွငျ အရပွေားဆဲလျတှကေိုအားကောငျးစပွေီး အရေးအကွောငျးဖွဈခွငျးမှလဲ ကာကှယျပေးပါသေးတယျ။
ဘီယာ ထမငျးစားဇှနျး၁ဇှနျးကို ကွကျဥအကာ နဲ့ သံလှငျဆီ ၃စကျခနျ့ရောပါ။ထို့နောကျ မကျြနာကို လိမျးပေးပွီး ၁ဝမိနဈထားပါ …။
ဘီယာမှာပါဝငျသော hop flower ကို ညအိပျမပြျောသော ရောဂါမြားတှငျ သဘာဝ အိပျပြျောဆေးအဖွဈထညျ့သှငျးအသုံးပွုပါတယျ။ သငျ့ ခေါငျးအုံးတှကေို ဘီယာ နဲ့ ရေ ဆတူရောထားသောအရညျဖွငျ့ လြှျောပေးပါ။ထိုခေါငျးအုံးဖွငျ့အိပျပါက မွနျမွနျအိပျပြျောပါလိမျ့မယျ …။
(၄) ခွထေောကျညောငျးခွငျးကို ပွလြေော့စတေယျ
ဇလုံးတဈခုမှာ ဘီယာအေးအေးကိုဖွညျ့ပါ။ထို့ထဲသို့ ခွထေောကျကို မိနဈအနညျးငယျနှဈပါ။ သငျ့ခွထေောကျကိုအညောငျးပွစေပေါတယျ …။
(၅) အသားမြား နှပျရာတှငျ အသုံးဝငျခွငျး
အသားမြားကို ဘီယာနှငျ့ နှပျခွငျးဖွငျ့ အရသာမပကျြစပေဲ ပိုမိုနူးအိစပေါလိမျ့မယျ။ သငျအသုံးပွုလိုသော အသားကို ဗူးတဈခုတှငျထညျ့ပါ။ထိုထဲသို့ ဘီယာနညျးနညျးထညျ့ပွီး ရခေဲသတောထဲတှငျ တဈညအိပျထားပါ။နောကျတဈနမှေ့ာ အရသာကောငျးမှနျပွီး နူးအိတဲ့အသားတှကေို ရရှိမှာပါ …။
ဘီယာခပျနှေးနှေးကို အဝတျစတဈခုတှငျ သုတျပါ။ထိုအဝတျဖွငျ့ သဈသားပရိဘောဂမြားကို ပှတျတိုကျပေးပါ …။
(၇) ယငျကောငျတှေ ကို ပွေးစတေယျ
ဘီယာကိုခှကျတဈလုံးတှငျထညျ့ပါ။ထိုခှကျကို အလူမီနီယမျပွားဖွငျ့ဖုံးပါ။ထိုအလူမီနီယမျပွားကို အပေါကျငယျလေးတှဖေောကျထားဖို့ လိုပါတယျ။ထိုအပေါကျကနတေဆငျ့ ယငျကောငျတှခှေကျထဲသို့ ကသြှားမှာ ဖွဈပါတယျ …။
(၈) သတ်တုမြားကို အရောငျတောကျပစခွေငျး
ဘီယာတှငျ အကျစဈပါဝငျမှု နညျးပါးတာမို့ သငျ့ လကျဝတျရတနာမြားနဲ့စတီးအိုးမြားကို ပွောငျလကျအောငျအသုံးပွုနိုငျပါတယျ။အဝတျစတဈခုကို ဘီယာဖွငျ့စိမျပွီး ပှတျတိုကျပေးရုံပဲဖွဈပါတယျ …။
ဘီယာတှငျပါသော အကျစဈမြားက သံကွေးမြာကို ဖွိုခှဲပေးပါတယျ။သံကွေးတကျသောအရာပျေါသို့ဘီယာကိုလောငျးပွီး မိနဈအနညျးငယျထားပါ …။
ည အိပ်ယာဝင် (၇) ခေါက် ရွတ်ပြီးအိပ်က လောကီအစီအရင် စုန်း နတ် ပယောဂ ကင်းစေသည့်ဂါထာတော် သင်္ဂင်္ဟ ဂါထာ (သ်ို့ ) ဝေ ဒါ သာ ကု ဤဂါထာတော်ကြီး ကို မန္တလေးတိုင်း အမရပူရ မြို့ သတ္တမမြောက် ကျော်အောင်စံထား ဆရာ တော်ကြီး မှတ်တမ်း တွင်.. တန်ပြန် ဂါထာ ဟု့၎င်း သရဖူဆောင်း ဂါထာ ဟု၎င်းဖော်ပြပါရှ်ိသည်။ ဂါထာတော် ၏ အစွမ်းနှင့် အသုံးပြု့ပုံ မှာ.. ရေ (သို့ ) ဆေး ကို ၃ ခေါက်ရွတ် ပြီး သောက်က ဆေးအာနိသင် …
နံနက်စာ မစားဖြစ်ရင် ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဒါတွေဖြစ်လာပါတယ် ဒီနေ့ခေတ်လူအများစုဟာ လှုပ်ရှား သွားလာ ရတာတွေ များတာကြောင့် မနက်စာ စားဖို့ကို မေ့လျော့နေကြပြီး မနက်စာ ရဲ့ အရေးပါပုံကို သိပ်မသိကြပါဘူး။ တကယ်တော့ မနက်စာ စားခြင်းဟာ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးကို အများကြီး အထောက်အကူ ပြုနေပါတယ်။ မနက်စာ မစားဖြစ်တဲ့ အကြောင်းရင်းကို စစ်တမ်းကောက်တဲ့အခါ အများစုက ကယ်လိုရီတက်မှာ စိုးလို့ မစားတာ ၊ မနက်စာ စားချိန်မရှိလို့ မစားတာ ၊ ဗိုက်မဆာလို့ မစားတာလို့ ဆိုကြပါတယ်။ မနက်စာ မစားဖြစ်တဲ့ လူတွေဟာ ပုံမှန် စားနေကျ လူတွေထက် နှလုံးရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေ (၂၇) ရာခိုင်နှုန်းပို …
ကွယ်​လွန်​ ပြီးတဲ့​နောက်​ ဝိညာဉ် ​ဘဝ နဲ့ အိမ် ​မှာ ၇ ရက်​​နေတယ်​ဆိုတာ ဟုတ်​ ၊ မဟုတ် မိရိုးဖလာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်​ အ​တော်​များများပင်​ ဘဝ​ ဟောင်းမှ ဘဝ သစ်​သို့ ​ပြောင်းကြရာ၌ ​သေလျှင်​​သေခြင်း မိမိ တို့ အိမ်​မှ ထွက်​မသွားပဲ ကွန်​လွန် ​သူ တိုင်း ၇-ရက်​လည်​​အောင်​ ​စောင့််​နေသည်​ဟု ယူဆ​နေကြပါ၏။ ထို့ပြင်​ ရက်​လည်​ သပိတ်​သွတ်​ မှ သာဓု​ ခေါ်ကာ ​ရောက်​ရမည့်​ဘဝကို ​ပြောင်းသွားသည်​ဟု အ​တွေးတိမ်စွာဖြင့်​​လည်း အထင်​လွဲ​နေကြပါ၏။အမှန်​အားဖြင့်​ ထိုသို့ ထင်​မြင်​ယူဆ​နေခြင်းမှာ လွဲမှားနေပါ၏။ ထိုကိစ္စရှင်းလင်းရလျှင်​ ပဋိသ​န္ဓေ စိတ်​ ​စေတသိတ်​နှင့်​ ကမ္မဇရုပ်​တို့၏ ပထမဆုံးဖြစ်​တည်​ရာ …
This Year : 146839
Total Users : 441972
Total views : 1699461